आज वेलुकी खग्रास चन्द्र ग्रहण | RevoScience Nepali
Home /आज वेलुकी खग्रास चन्द्र ग्रहण
आवरणJanuary 31, 2018
काठमाडौं । आज वेलुकी ५ बजेर ३६ मिनेट देखि ८ बजेर ५६ मिनेट जाँदा खग्रास चन्द्रग्रहण नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ । नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासोका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईका अनुसार अवलोकनकर्ताले ६ बजेर ३६ मिनेट देखि १ घण्टा १६ मिनेट सम्म अर्थात् ७ बजेर ५२ मिनेट सम्म चन्द्रमालाई तामा रंगमा देख्न सकिनेछ । यस अवधिलाई खग्रास भनिन्छ। त्यसपछि ग्रहण क्रमसः कम हुदै राति ८ बजेर ५६ मिनेटमा सकिनेछ ।
नासोका अध्यक्ष भट्टराईले यस बर्ष अंग्रेजी जनवरी महिनामा दुईवटा पूर्णे परेको बताए । उनले यस्तो दुर्लब अवस्था १५२ वर्ष पछि देखिएकोले बढी महत्वकासाथ हेरिएको बताए ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार चन्द्रग्रहणका हेर्दा हानी नोक्सानी गर्दैन । त्यसैगरी वैदिक मान्यता अनुसार पनि चन्द्रग्रहण सामान्य प्रक्रिया हो भनिएको पाइन्छ । तर पूराणहरुभने मत बाझिएको पाइन्छ जस अनुसार राशी अनुसार ग्रहणलाई अवलोकन गर्नु भनिएको छ ।
खगोल वा ज्योतिषशास्त्रमा ग्रहण भन्नाले एउटा आकाशीय पिण्डको छायाँले अर्को आकाशीय पिण्डलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा छेकेर अन्धकार बनाइदिनु भन्ने बुझिन्छ।
पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहँदा चन्द्रमाले पनि पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। यस क्रममा पृथ्वी जब सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पर्न जान्छ, तव पृथ्वीको छाँया चन्द्रमामा पर्दछ ।
चन्द्रमाको आफ्नो प्रकाश नभएका कारण पृथ्वीको उक्त छाँयाले चन्द्रमा छेकिन्छ, जसलाई नै चन्द्रग्रहण भनिन्छ ।
ग्रहण खग्रास र खण्डग्रास गरी दुई प्रकारको हुन्छ । ज्योतिषीय भाषामा ग्रहण पूरै छोप्ने अवस्थालाई खग्रास भनिन्छ भने केही भाग कालो देखिने अवस्थालाई खण्डग्रास भनिन्छ ।
ग्रहण ‌औंसी र पूर्णिमामा लाग्छ । सृर्य ग्रहण औंसीमा लाग्छ भने चन्द्रग्रहण पूर्णिमामा लाग्दछ ।
त्यस्तै चन्द्रमाको कक्षले पृथ्वीको कक्षीय धरातललाई दुई बिन्दुमा काटेको हुन्छ। यी दुई बिन्दुहरुलाई प्राचीन ज्योतिष शास्त्रमा राहु र केतु नाम दिइएको छ।
सुपरमुन के हो?
चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा अन्डाकार बाटोमा गर्दछ । यस्तो बाटोबाट परिक्रमा गर्दा चन्द्रमा कहिले पृथ्वीको नजिक आउँने वा कहिले टाढा जान्छ । त्यसैले पूर्णिमाको समय चन्द्रमा पृथ्वीको अधिक नजिक आउनुलाई सुपरमुन भन्ने गरिन्छ। ग्रहणको बेला मात्र सुपरमुन देखिने भन्ने हुँदैन ।
ग्रहणको समयमा आज चन्द्रमा पृथ्वीबाट करिब ३,५८,००० किलोमिटरको दुरीमा रहनेछ। पृथ्वी र चन्द्रमाको औसत दुरी ३,८४,००० किलोमिटर हो।
ब्लू–मून के हो ?
ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार एउटा महिनामा दुईवटा पुर्णिमा परे दोस्रो पुर्णिमालाई ब्लु–मुन भनिन्छ । नेपाली समय अनुसार गत जनवरी २ तारिखमा पूर्णिमा परेको थियो भने जनवरीको अन्तिम दिन आज पनि पुर्णिमा परेको छ।